संक्रान्तिका लागि तरुल किन्दै हुनुहुन्छ ? भाउ थाहा पाइराख्नुहोस् - Samudrapari.com
संक्रान्तिका लागि तरुल किन्दै हुनुहुन्छ ? भाउ थाहा पाइराख्नुहोस्
काठमाडौं – पोहोरको तुलनामा यसवर्ष तरुलको भाउ महंगो भएको छ । योवर्ष औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत तरुलको भाउ बढेको हो । तर हिजो अस्ति भाउ बढेपनि आइतबारदेखि तरुलको भाउ घट्न थालेको काठमाडौंको मुख्य थोक बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।